Ejypta: andeha tifirina ireo mpanao fihetsiketsehana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2018 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, عربي, Español, English
Raha niresaka momba ny fihetsiketsehana miverimberina sy ny fihetsiketsehana prô-demaokrasia faha-6 Avrily, notabatabain'ny mpikambana ao amin'ny Antokon'ny fitondrana, Antoko Demaokratikam-pirenena Ejiptiana (NDP) ao amin'ny Parlemanta, ny solombavam-bahoakan'ny Mpirahalahy Miozolomana manoloana ireo mpanao hetsi-panoherana tao amin'ny firenena tamin'ny alahady raha nilaza fa ” tokony hotifirin'ny polisy” ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia Ejiptiana”.
Bikya Masr nitatitra hoe:
Niteraka fahatezerana faobe teo amin'ny fiarahamonin'ny mpikatroka ny fanambaràna, mamoaka amin-kery ny feon'izy ireo mba ho re ao anatin'ny famoretana toa tsy mitsahatra ataon'ny governemanta.
Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “avelao hanomboka ny revolisiona“, Zeinobia tsy mety mino fa:
Niantso ny minisiteran'ny atitany ny depiote Ragab Hamida sy ny depiote Nashat El-Kassas mba hampiasa bala tena izy amin'ireo mpanao fihetsiketehana mandritra ny adihevitra momba ny tanora amin'ny 6 Aprily !!!
Naneho hevitra izy hoe:
Bala tena izy !! eny, raha mila bala tena izy ireo, dia maniry revolisiona ary ny fanontaniana ankehitriny dia hoe:
Vonona hisian'izany ve izy ireo!! Satria tena vonona ho amin'ny revolisiona ny vahoaka, leo izy ireo ary tsy mahazaka izany intsony.
Na i Zeinobia na i Bikya Masr samy nanonona depiote iray nanome anarana ny mpanao fihetsiketsehana
karazana anarana rehetra, anisan'izany ireo mpamadika!!
Tsy ampy izany hoe ireo izay nosamborina dia tahaka izao sisa tamin'ny famotsorana azy ireo, [Sarin'ilay mpikatroka Bahaa Saber izay nalaina an-keriny tao anaty hetsi-panoherana ho an'ny fanovana tamin'ny 13 aprily ary nampijaliana mafy mandra-pamotsorana azy roa andro taorian'izay.)
Araka ny filazan'i Bikya Masr:
Nilaza ny solombavambahoaka Hassan Nashat al-Kassas, manondro ny hetsiky ny Tanora 6 Aprily izay nanatontosa hetsi-panoherana roa vao haingana tao Kairo, ary nahitana polisy nidaroka azy ireo an-kerisetra no sady nisambotra olona maro, fa “tsy mpikatroka tanora ireo, fa andiana mpirenireny.”
Nikarantsana tao anatin'ny resadresaka ny solombavambahoaka Ahmed Abu Akrab ary nilaza fa “misitraka toetr'andro demaokratika i Ejipta tato ho ato”.
Saingy lasa lavidavitra kosa i al-Kassas tamin'ny fanehoan-keviny nandritra ny fifamaliana tao amin'ny Parlemanta, ary nilaza fa tokony hosaziana noho ny hetsiny ireo mpanao hetsi-panoherana. Nilaza izy fa tokony “hikapoka azy ireo mafy, hitifitra azy ireo tsy amin'ny rano ihany … fa mendrika [tifitra] ireo,” ny governemanta, fanondroana ny fampiasana bala tena izy amin'ny mpanao fihetsiketsehana izay milamina amin'ny ankapobeny.
Tamin'ny lahatsoratra teny am-boalohany, Wild at Heart nanoratra tamin'ireo depiote:
Ianareo andiana jiolahimboto! Tsy tokony holazaina ny zavatra tsy misy dikany toy izany – na dia tsy mampihetsi-po aza! Raha mbola matin'ny hanoanana, tampenam-bava sy ampahoriana ireo mpikatroka, mpiasa, mpanao gazety, sy ny mpikambana ao amin'ny antokon'ny mpanohitra, dia mbola hanohy ny fanoherana sy ny fihetsiketsehana ry zareoo mandrapanomen'izy ireo fahasahiranana tsara ho anareo!
Tao amin'ny lahatsoratra manaraka, namoaka ny sarin'ireo solombavambahoaka izay nitaky ny fitifirana ireo mpanao fihetsiketsehana i Wild at Heart, nilaza izy fa izy ireo dia:
Karohina noho ny fikotrehana famonoana olona!
ary noho izany
raha misy olona maty mandritra ny fihetsiketsehana, fantaro ny tanana nitifitra azy
Nawara Negm nanoratra tamin'ny lahatsoratra tezitra mitondra ny lohateny hoe:
Aza miresaka amiko androany: Firenena Nazi amin'ny fomba ofisialy isika!
Rehefa mitaky ny fampiasàna bala tena izy eny an-dalambe ireo solombavambahoaka ireo, dia efa tonga amin'ny maha-Nazi antsika isika! Ary ho an'ny fampahafantarana anao fotsiny, nampianatra antsika ny tantara fa noteren'ny hery ivelany hiverina amin'ny fanajana ny mahaolona ireo firenena fasista rehetra, izay tsy nihetsika ny vahoaka tao aminy.
Amira AlTahawi - izay very asa noho ny namoahany ny fisian'ny maha-virijiny fitaka – mihevitra fa:
Mandrahona hamono ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny fomba mitovy amin'ny namonoan'izy ireo ny mpitsoa-ponenana ny governemanta Ejypsiana.
Tsy nisy tao amin'ny antokon'ny fitondrana nanohitra izay voalaza. Tsy nisy olona nitaky ny hanesorana izany ao anatin'ny firaketan-tsoratra ofisialy? Tsy nisy na dia olona nanangan-tanana hanohitra aza? Tena solontenan'ny vahoaka marina ve ireo solombavambahoaka ireo? Ireo olona ireo ihany ve no te hitifitra hahafaty olona sivily? Na izany na tsy izany, misy ny fihetsiketsehana manoloana ny antenimiera amin'ny Talata! Ampisehoy anay ny fomba hampiasanareo ny bala tena izy!
Fanamarihana ho an'ny mpanao fihetsiketsehana: Ho ento ny basi-ranonareo!
Tao amin'ny Facebook, natsangana ny vondrona antsoina hoe “Tsy matahotra ny balanareo izahay” ary ity ny rohin'ny pejin'ny fihetsiketsehana! [Samy efa maty ireo rohy roa ireo]